Madaxweynaha soomaaliya oo gaaray deegaanka Carmo ee Gobolka Bari | Saadaal Media
Madaxweynaha soomaaliya oo gaaray deegaanka Carmo ee Gobolka Bari
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaalitya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray deegaanka Carmo ee Gobolka Bari,halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Safarka madaxweynaha oo ah mid dhanka lugta ah waxaa ku wehlinaya madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas,wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan golayaasha kala Duywan ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Dad weyn aad u fara badan oo ruxayay caleemo qoyan ayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa deegaanka Carmo ku soo dhoweeyay,kuwaasi oo ku faraxsanaa safarka madaxweynaha ugu yimid.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa la kulmay qeybaha kaladuwan ee bulshada iyo waxgaradka deegaankaasi,isago uga mahadceliyay sida wanaasgan oo ay u soo dhaweeyeen.
Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa deegaanka uga sii amba bixi doona magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari,halkaasi oo amaankeeda si aad ah loo adkeeyay,iyadoo shacabka ku dhaqan magaalada Bosaaso xiligan u diyaarsan yihiin soo dhoweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo wafdiga uu hogaaminayo.